Plants | Mapeji evaravara ehurukuro
Mifananidzo yemiti - unakidzwe nekushambadzira paunhare
Mamwe mapeji emiti
Mifananidzo yemarudzi ezvizvarwa
Zvirimwa, shrubs, uswa nemiti - zvose izvi chikamu chemaitiro edu akanaka. Kune vanhu vazhinji, iyo inoratidzira kunaka uye inoita nzvimbo yakasununguka, kunyange muhupenyu hwezuva nezuva hwe21. Century.
Miti - Zvikamu zvakanakisisa zvezvisikwa
Ingotarisa maguta makuru enyika yedu. Kunyange muNew York City, nedzimwe nzira "amai" vemaguta makuru, kune huni huru yehusi yehupenyu hwakanaka seCentral Park.
Kuti nzvimbo huru imwe yenzvimbo dzine mukurumbira maguta munyika rinoshandiswa ive oversized paki uye nokudaro rokugovera mimwe kuvaka nzvimbo mahofisi uye Lofts, kukosha zvinomera uye hunhu inoratidza zvavo.
Asi kudzoka kubva kuNew York City kusvika kumaguta nemisha yekwedu. Vanhu vazhinji vanokoshesa kukosha kwebindu uye nzvimbo yakasvibirira pavanotsvaka imba kana imba. Hazvishamisi, mushure mezvose, unonzwa wakasununguka zvikuru mukati mekurima kwema munda, iwe unofara uye unokanganwa kushungurudzika kwekunetseka kwehupenyu hwezuva nezuva.
Nguva yemwaka - chishamiso chezvisikwa
Asi kwete chete yhizha inoita kuti mwoyo yedu irove nokukurumidza. Nguva imwe neimwe ine char Mvura ine chando uye miti mumwaka wechando inotevera gungwa reruvara, ruvara rwemaruva uye rutsvuku muvhu. Apo mazuva anodziya zvakare, yekutanga inomera inobva mumiti isina miti uye yekutanga miti inotanga kuzarura runako rwavo.
Uye kunyange mumasvingo edu mana, isu tinongotya kuita pasina zvisikwa. Kutanga nemiti miduku yakawanda yepamusoro pemiti yemvura mumvura ye aquarium kusvika pamichindwe-miti yemichindwe, inenge imwe neimwe yedu ine michero sechishongo mumba medu. Izvo zvose pamasikirwo emutumbi, kunyange kana ichingova chimiro chechimiro chechimiro chemhando yezvibereko zvekugadzira, vashoma vedu tinoda kuita kunze.
Kwete kwete, mifananidzo yakawanda yeyeuchidzo yakaitwawo muhupenyu hwakanaka. Asi kunyange mifananidzo iyo inongoparadza muviri wedu wakanaka, ine chikumbiro chakakosha uye haisi muzvizhinji zvemba dzedu. Kunyanya pamakombiyuta kana ma smartphone mapikicha emitambo yedu yakanaka uye miti inofara chaizvo kushandisa.
Nokuda kwechikonzero ichi, isu tinofara kupa sarudzo yakanaka yemifananidzo yemiti iri pasi apa.
Zvechokwadi, mapikicha haagoni kukwana zvachose nzvimbo chaiyo chaiyo. Kana iwe uchida kuona mifananidzo yakajeka uye yakasiyana-siyana yehupenyu hwedu mukuzara kwayo, unofanira kungoenda kumhepo itsva. Zvisinei, mifananidzo yezvirimwa panzvimbo yedu yepaiti yakakosha nokuda kwechando uye nguva inoshushikana uye inogonawo kuunza zvinyorwa zvekugara kumba kuvanhu vanobva kuguta guru vasingagari mumaruwa.
Kuratidza mifananidzo mifananidzo